बागलुङमा चौध किलोको “ब्रोइलर” कुखुराको भा’ले ! – Life Nepali
बागलुङमा चौध किलोको “ब्रोइलर” कुखुराको भा’ले !
वाग्लुङ। उमेर चार महिना । भारी जीउ । हाँसको झैँ चाल । भुइँमा थ’चक्क बसेपछि झट्टै उ’ठ्दैन । सुस्तरी खोर चाहार्छ, चारो टिप्छ । यसरी नै एउटा ‘ब्रोइलर’ कुखुराको भालेले आफ्ना आ’खिरी दिन का’टिरहेको छ । गत असोज ११ गते ‘अर्पणा पोल्ट्री फार्म’मा आ’एदेखि यसको आ’यु र तौलको ग’न्ती सुरु भयो । डेढ महिनाअघि १२ किलो २०० ग्राम रहेको भाले अहिले बढेर १४ किलो पुगेको छ । दै’निक ५० ग्रामका दरले बढिरहेको भालेको तौल १६ किलोसम्म पुग्ने आँकलन कुखुरापालकको छ ।
‘यो भाले परीक्षणका लागि लामो समय पालिएको हो’, फार्मका सञ्चालक विजय श’र्माले भन्नुभयो, ‘अब यो धेरै समय यहाँ रहँदैन होला ।’ ‘ब्रोइलर’ कु’खुराको आयु र तौलबारे अनुभव लि’न नबेची रा’खिएको उ’हाँको भनाइ छ । उक्त भालेले अहि’लेसम्म छ किलोभन्दा बढी दाना खाइसकेको छ । उचित हेर’चाहले भाले निरोग छ । ‘भाले किन्नका लागि धेरैले सो’धिरहनुभएको छ, वनभोज जाने या त्यस्तै समूह आए बेच्ने तयारीमा छु’ शर्माले भन्नुभयो । त्यस भा’लेलाई अहिले बे’च्दा बजार मू’ल्य तीन हजार रुपैयाँ २०० पर्छ । बागलुङ नगरपालिका–३ रा’तामाटा’स्थित ‘फार्म’मा पुग्ने जो कोही द’ङ्ग मा’नेर भाले हेर्छन् । तस्बिर सुदुरसमाज”
कतिले उ’चाल्छन् पनि । भालेसँगै हुर्किएका दुई पोथी पनि छन्, जसको तौल आठ किलो पुगेको छ ।नाफा घाटा हेर्दा बुढोहुञ्जेल कुखुरा पाल्नु व्याव’सायिक हि’तमा नभए पनि परीक्षणले नयाँ सि’काइ भएको कुखुरापालक शर्माको भनाइ छ । पैँता’लीस दिन काटेपछि ‘ब्रो’इलर’ कु’खुराको’ तौल दैनिक ५० ग्रा’मका दरले ब’ढ्ने गर्छ । पैँतालीसदेखि ६० दिनभित्र कुखुरा बेच्नयोग्य हुन्छ । ‘ब्रोइलर’ कुखुराको आयु छदेखि आठ महिनासम्म हुने बताइन्छ । शर्मा विसं २०६१ देखि कुखुरापालन व्यवसायमा हुनुहुन्छ ।
घर व्यवहारदेखि, बाल बच्चाको पढाइसम्म सोही’ व्यवसायबाट धानिएको छ । ‘फार्म’मा अहिले एक हजार कुखुरा छन् । उहाँलाई व्य’वसायमा श्रीमती गीताको द’रिलो साथ छ । ‘१६ वर्ष भयो कुखुरापालनमा’ लागेको, ४५ हजार रुपैयाँबाट सुरु गरेको लगानी अहिले १२ लाख रुपैयाँ बढी’ पुगेको छ’, गीताले भ’न्नुभयो । शुरुमा’ घरकै सानो कोठाबाट शर्मा दम्पतीले कुखुरापालन व्यवसाय सुरु गरेको थियो । उहाँहरुले’ अहिले आधुनिक’ खोर’ बनाएर कुखुरापालन गरिरहनुभएको छ । वर्षमा छ ‘लट’ कुखुरा तयार हुन्छन् । एक पटकमा झण्डै ६० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म मुनाफा नि’स्कन्छ ।
बजार मूल्यमा आउने उतारचढावले कहिलेकाहीँ आम्दानी घटबढ हुन्छ । अहिले जिउँदो ‘ब्रोइलर’ कुखुरा प्रतिकिलो २३० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । कुखुरापालनसँगै शर्मा दम्पतीको मासु, किराना र खाजा पसल पनि छ । ‘फ्रेस हाउस’का लागि भेटेरिनरी’ अस्पताल ‘तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङबाट गत आवमा एक लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनुदान आएको थियो’ । त्यसमा तीन लाख रुपैयाँ थपेर मापदण्डअनुसारको व्यवस्थित ‘फ्रेस हाउस’ सञ्चालन गरिएको शर्माले बताउनुभयो । व्यवसायमा शर्मा दम्पतीको लगाव र मेहनत देखेर गाउँले पनि छक्क पर्छन् ।
‘विदेशको सपनालाई ‘सधैँका’ लागि त्यागेर गाउँघरमै बसी केही गर्ने सोचका’ साथ अघि बढेको छु’, शर्माले भन्नुभयो, ‘परिवार र छिमेकीको पनि राम्रो साथ छ ।’ शर्मा यसअघि रोजगारीका क्रममा’ तीन वर्ष अरबमा बिताएर फर्कनुभएको हो । ‘ अब त मैले पनि विदेश जान दिन्न, यहीँ सुखदुःख गरेर बस्ने हो’, शर्माकी’ श्रीमती गीताले भन्नुभयो, ‘ठूलो देश जाने चक्करमा न काम भयो, उल्टै दलालले पैसा खाए ।’ वर्षौंदेखि काम गरे पनि कुखुरापालनमा अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान नपाएको शर्मा दम्पतीको गु’नासो छ । कुखुरा पालकका लागि अनुदानभन्दा अनुभव आदानप्रदान र तालीम बढी महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।-रासस
Previous सुदूरपश्चिमको बेरोजगारी अन्त्य गरी चाडै गरीबी हटाउछौ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट
Next नेपाल रेल सेवाका लागि २ सय २६ कर्मचारी करारमा लिने”